Ukufakwa kwe-Workstation - Amanethiwekhi wekhompyutha ama-SMEs | Kusuka kuLinux
1.1 Ukusikisela kohlelo lokusebenza okuzofakwa
2 Masifake i-Debian Jessie ngokusebenzisa izithombe igxathu negxathu
2.1 Ukucaciswa okufanele ukukhunjulwe lapho ufaka iDebian Jessie
2.2 Isinyathelo ngesinyathelo sendlela yokufaka i-Debian Jessie
Nginozakwethu ophethe amaseva nohlelo lokusebenza isikhathi eside I-FreeBSD. Usebenze ngisho nenkathi enhle enkampanini yami futhi ngokuhlanganyela sisebenzise isiphakeli se-Chat nge Umlilo ovulekile ku-FreeBSD, nenye ye-intranet yenkampani nge WordPress mayelana neFreeBSD. Akazange adele indawo yakhe yokusebenza ye-Windows 7! Iphathe amaseva nge- «Iklayenti leSSH Elivikelekile»Okwe-Windows.
Abaphathi abaningi benethiwekhi Abasebenzisi abasebenzayo banokuncamelayo kwabo abakusebenzisayo ezitolo zabo zokusebenza, futhi bazizwa bekhululekile ukuphatha ngabo. Kule ndaba akukho ngxoxo engenzeka. Wonke umuntu usebenzisa lokho akufunayo, isikhathi.
Njengamanje kuvame kakhulu ukuthi cishe zonke izinsizakalo zethu zisebenza kumaseva abonakalayo. Lapha futhi kuyenzeka, phakathi kwezinye izinto, i-hardware etholakalayo, okuncamelayo, izinqubomgomo zebhizinisi, ukufinyeleleka kwipulatifomu ethile yokubona kanye nesipiliyoni ekusetshenzisweni kohlelo oluthile.
Ezweni lika Isofthiwe yamahhala kukhona okungcono kakhulu -Ngombono wami- amapulatifomu wokwakha nokuphatha amaseva abonakalayo, angafinyeleleka ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sewebhu. Phakathi kwabo bonke sizobalula I-Proxmox, naku- kwm ne OVirt we I-Red Hat. Abazanayo I-Qemu-Kvm eza ezinqolobaneni zeDebian ne-Ubuntu, singakwazi ukuyilawula ngohlelo lokusebenza lokuqhafaza Umphathi we-Virt, noma ngochungechunge lwemiyalo elisinikeza yona Ingculazi.
Amanye amaSysadmin asebenzisa i- I-Virtualbox. Abanye, amapulatifomu okuphathelene neMicrosoft ©.
Lapho ukhetha ukuthi yiluphi uhlelo esizolufaka esiteshini sethu sokusebenzela, inkinga etholakalayo yehadiwe ichaza kahle. I-Desktop Environment ibuye ibe nomthelela ekusetshenzisweni kwezinsizakusebenza noma ngabe KDE, I-Cinnamon, I-GNOME, MATE, I-XFCE, noma I-LXDE, ukubalula okusetshenziswe kakhulu. Abanye abaphathi bakhetha abaphathi bamawindi abalula, futhi abaningi benza ngokwezifiso kakhulu.
Izidingo ezisezingeni eliphansi ze-OS ngayinye (Uhlelo Lokusebenza) ziyahlukahluka futhi, futhi ezikhathini eziningi esinakho kungumqondo oqhathanisayo wokuthi i-OS enjalo isebenzisa kakhulu kunalena, futhi sakha nomhlangano omuhle wamaTroll ngale ndaba. 😉
Sifuna nje ukunaka, ikakhulukazi kwabasunguliwe, ukuthi izinto ezibalulwe ngenhla azilutho uma uthatha isinqumo sokuthi yiluphi uhlelo lokusebenza, iyiphi imvelo yedeskithophu, nokuthi iyiphi i-virtualizer -uma i-hardware yami ikuvumela- sizokufaka esiteshini sethu sokuphatha, noma elabhorethri yasekhaya.
Ukusikisela kohlelo lokusebenza okuzofakwa
Siphakamisa isetshenziswe Debian, Fedora, CentOS, u Vula i-OpenSUSE esiteshini sethu somsebenzi. Yizinhlelo ezisebenzayo ezinokuqina okuqinisekisiwe. Okwezemvelo kweDeskithophu, wonke umuntu uyazi ukuthi lowo osetshenziswa kakhulu yi-LXDE, futhi lowo onezindawo eziphakeme kakhulu, Ngicabanga kungaba yi-KDE noma iCinnamon. Njengesikhulumi se-virtualization, esivumelana ngokuphelele naleso esisisebenzisa ekukhiqizeni ezinkampanini zethu.
Akusho ukuthi uma sinendawo yokusebenza eneprosesa ye-Intel® Core® i5 noma ngaphezulu, i-8 Gigs ye-RAM, i-hard Solid State disk, nezinye izinto, asikhethi umthengi omkhulu wezinsizakusebenza, okuyiyona ncamashi lena esiyithanda kakhulu naleyo esiyijwayele.
Ngamunye kufanele asebenzise okukufanele kakhulu ukunqoba kwabo kwangempela.
Futhi ukulandela iseluleko esedlule, thina esine-hardware enesizotha njenge-Intel® Pentium® CPU G2020 @ 2.90GHz, ene-4 Gigs ye-RAM kuphela, sikhethe i-Debian 8 "Jessie", MATE njenge-desktop, ne-Qemu- KVM .
Esimweni sami esithile, kungani MATE? Ngoba ngoSarge, Etch, Hardy, Lenny, kanye Squeeze, ngisebenzise iGNOME-2. Ngaphuciwe indawo engangiyithanda isikhathi esithile noWheezy, waze wayiswa egatsheni laseBackports. Manje nge-Debian 8, ngibuyile ukujabulela imvelo engiyithandayo.
Masifake i-Debian Jessie ngokusebenzisa izithombe igxathu negxathu
Sine-CD noma i-flash memory nesifaki sohlelo lokusebenza.
Ukucaciswa okufanele ukukhunjulwe lapho ufaka iDebian Jessie
Ukukhethwa nokumenyezelwa kwamapharamitha ahlukile ngokwesibonelo kuphela.
Ukwahlukanisa i-Hard drive ngesinye isibonelo. Singakhetha noma yiluphi olunye uhlelo lokuhlukanisa nezinhlobo zalo. Besifuna nje ukwenza isibonelo sokuthi selokhu kwafakwa uhlelo, singacabanga ngesidingo sediski enzima yemishini ebonakalayo, okuwukuthi, iQemu-Kvm ibabeka ngokuzenzakalela ku- / var / lib / libvirt / images.
Esikrinini esithi "Lungiselela umphathi wepakethe", lapho ubuzwa ukuthi sifuna ukusebenzisa isibuko senethiwekhi, siphendule . Kusebenza futhi uma sikhetha lokho , okumele sibe nokugcina kwenye ikhompyutha kunethiwekhi yethu yasendaweni, noma kuseva eku-Intanethi. Vele, uma izinqolobane zikumaseva aku-Intanethi, kufanele sibe nokuxhumana okusheshayo neWWW Village.
Uma kusinyathelo "Sokukhethwa kwezinhlelo" sishiya inketho [X] Imvelo yedeskithophu ihloliwe, uhlelo luzofaka i-GNOME 3.14 noma indawo ephakeme yokuqhafaza, kuya ngezinqolobane esinazo.
Isinyathelo ngesinyathelo sendlela yokufaka i-Debian Jessie
Esitolimeni esilandelayo, sizogqoka iseva yethu ngemvelo yokuqhafaza ye-MATE.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukufakwa kwe-Workstation - Amanethiwekhi wekhompyutha wama-SME
Indatshana enhle kakhulu. AbakwaSysadmin bayasebenza futhi basebenzise kahle ukusethwa abakwelulekayo. Ubuntu server qemu-kvm on the server with virt-manager on my workstation. Impilo ibingenakuba lula. Ozithobayo!
Ukusho ukuthi i-fedora yindawo ezinzile kungukufuna ukukhohlisa noma ukungazi ukuthi kukhulunywa ngani. Ngikuphonsela inselelo yokuthi usebenze isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbili naye futhi ubone ukushayisana okubangelwa yi-libreoffice. Lokho ukubeka umsebenzi olula. Isihleli sombhalo nespredishithi. Ake sibone ukuthi ungaba nesibindi esingakanani.
Ngibe ne-fedora 23 isikhathi esingaphezu konyaka futhi anginankinga, kangangoba anginaso isidingo sokuyiguqula ibe ngu-24…. Ngicabanga ukuthi inselelo yakho iyadlula
Uzoyisebenzisela ukuhlela umbhalo futhi ungazulazuli ngokunye….
Sawubona Fico, lokhu okuthunyelwe kungivusele ukukhathazeka okukhulu ne-incognito ... Angazi okuningi mayelana nokwenza kahle futhi kuyadingeka kulezi zikhathi ukonga ku-PC ... ngakho-ke umbuzo ukuthi iyiphi indlela engcono kakhulu yokwenza amaseva asebenze kahle, ngokwesibonelo ukuba neseva yama-imeyili, iseva yemiyalezo kanye neseva yedathabheyisi konke kwi-PC efanayo eyenza ama-PC amaningi futhi isabalalise lezi zinsizakalo kulezi zivakashi. Ngichaze? Nginolwazi ngeDebian neCentos, angazi ukuthi yiluphi uhlelo olungaba ngcono kakhulu lokuqinisekisa ukutholakala okuphezulu. Ngiyabonga kusengaphambili.
Into enhle ongayisebenzisa ukwenza i-proize yiProxmox, lokhu kumahhala futhi kukuvumela ukuthi ulungiselele iqoqo futhi ukutholakala okuphezulu kuyasabazeka (ungangeza ababungazi abaningi) futhi ukuze ngigcine ngingancoma iqoqo ne-CEPH. Mayelana
Ngiyabonga nonke ngemibono nangemibono yenu !!!
Siyabonga ngale ndatshana enhle kakhulu.
Angikaze ngisebenze ne-proxmox, ngizwile ngayo futhi angingabazi ngamandla ayo, ngoba baningi ozakwethu asebeke bangitshela ukuthi ngeke kube khona. Ngikutshela kuphela ngokuhlangenwe nakho kwami, iminyaka engaphezu kwengu-2 ngisebenza noQemu-KVM "THE MAXIMUM", futhi lapho ngifika kumyalo weVirsh ngizokutshela. Sl2 wonke umuntu.
Indatshana enhle kakhulu ye-FICO, kuhle !!!
Ngifisa ukusho ukuthi angingabazi ngamandla kanye nezici zaleyo software enkulu ebizwa ngeProxmox, sekuvele kube nozakwethu abaningi abangitshele ngakho ukuthi ngeke kube khona ukungabaza.
Ngingakhuluma kuphela ngalokho engiye ngabhekana nakho noQemu-KVM «THE MAXIMUM», engiqashwe yimina iminyaka engaphezu kwemibili, ngiyinikeza isilinganiso esiphezulu, nokuthi angijwayele umyalo weVirsh, hahaha, lokho kuzoba esinye isigaba. Sl2 wonke umuntu.
Siyabonga ngokuphawula kwakho okuhlakaniphile, mngani uCrespo88. Ngomyalo weVirsh, singakwazi ukufaka, ukumisa nokuphatha noma yisiphi isici esihlobene nemishini ebonakalayo eyenziwe ngeQemu-KVM. Sizonikezela i-athikili yakho kulesi sihloko.
Ngiyabonga Fico, ngakho-ke siyaqhubeka nokwandisa uhla lolwazi futhi siyabona ukuthi lo myalo ukuletha kuwe. Bhala ngokuthi kungaba mnandi kanjani. Sl2.
I-KDE Frameworks 5.28.0 itholakala ngezithuthukisi ku-KWayland